Grab Driver 5.92.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.92.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Grab Driver
Grab Driver ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖမ်းပြီး Driver - Driver များအတွက် App ကို
- သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူဌေးရှိကြလော့။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်းဆုပ်နှင့်အတူကားမောင်းခြင်းဖြင့်ပိုပြီးဝင်ငွေ။
- ထို app ထဲမှာအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုအားခြေရာခံ။
- သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်, သင်တန်းနှင့်ထောက်ခံမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရယူပါ။
ဆုပ်ယူထိထိရောက်ရောက်ခရီးသည်နှင့်အတူယာဉ်မောင်းကိုက်ညီမယ့်စမတ်ဖုန်း App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ရန်ပုံငွေမျှော်လင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးခရီးသည်ရဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေတဲ့တက္ကစီယာဉ်မောင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆုပ်ယူသင်တို့အဘို့, လက်ျာဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ရန် READY က?
အဆင့် 1: ဆုပ်ယူယာဉ်မောင်း app ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။
အဆင့် 2:, app ကိုဖွင့်ပါ '' Up ကို Sign '' အပေါ်သာပုတ်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့လမ်းထိမှန်နှင့်ဝင်ငွေကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ပါပဲမရောက်မှီတိုင်အောင်သင်သည်ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
THE ဖမ်းပြီး Driver APP ကို ​​Download လုပ်ပြီးဒီနေ့ sign up ကို!
သို့တိုင်မေးခွန်းများ? ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက် www.grab.com/driver/ မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဆုပ်ယူမလေးရှား, စင်္ကာပူ, အင်ဒိုနီးရှား, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်, ဖိလစ်ပိုင်, မြန်မာနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားလက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်။
Grab Driver အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Grab Driver အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Grab Driver အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Grab Driver အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.17k 7.81M
Grab Driver ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Grab Driver အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.92.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.grab.com/privacy/
File Size: 71.56MB
Release date: 2019-09-10 18:13:17
လက်မှတ် SHA1: 15:A6:52:2D:45:BB:DB:81:BF:6C:D9:C2:FB:FB:6F:DF:EC:5C:91:DE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Aaron Gill
အဖွဲ့အစည်း (O): MyTeksi
နယ်မြေ (L): KL
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): WP
Grab Driver APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ